Landa: Umhlahlandlela Ocacile Futhi Ophelele Wokuhlangenwe nakho Okususelwe ku-Akhawunti (ABX) | Martech Zone
I-Demandbase iguqula indlela izinkampani ze-B2B ezidayisa ngayo. I-Demandbase One iyisiqalo esiphelele kunazo zonke sezixazululo ze-B2B zokuya ezimakethe, ezixhumanisa isipiliyoni esihamba phambili esuselwa ku-akhawunti, ukukhangisa, ubuhlakani bezentengiso, kanye nezixazululo zedatha ye-B2B ukuze amaqembu okuMaketha nokuThengisa ezinkampanini ezinkulu futhi ezikhula ngokushesha angasebenzisana ngokushesha, yabelana ngobuhlakani, futhi uzwe ukukhula okuqhumayo.
Umphathi Omkhulu Wezokumaketha, UJon Miller, ubhale futhi washicilela le-ebook elisha elihle ngokuvela kwe-Akhawunti Esekelwe Ekumaketheni (ABM) ... Okuhlangenwe nakho kwe-Akhawunti (ABX).
Kuyini Okuhlangenwe nakho kwe-Akhawunti (ABX)?
Ukucabanga kabusha okuyisisekelo, okugxile kumakhasimende kwemakethe esekwe kuma-akhawunti - ehlanganisa ukubandakanyeka kokumaketha okungenayo ngokunemba nokuqondiswa kwe-Marketing-based Marketing. I-ABX ithuthukisa zonke izici zesipiliyoni somthengi kuyo yonke impilo ye-B2B futhi idlula ngokumangalisayo i-ABM elula kanye nesidingo sendabuko gen. I-ABX ingukuziphendukela okufanele kwe-Marketing-based Marketing.
Ukumaketha kwesimanje kwe-B2B kumayelana nokwenza ngcono zonke izici zesipiliyoni somthengi, kuyo yonke impilo ye-B2B, nokwenza i-ABM elula nokwenza okudingwayo gen. Isikhathi sokuvela okulandelayo kumasu we-B2B wokuya emakethe. Asikwazi ukuqhubeka senza izinto ezifanayo futhi silindele imiphumela ehlukile.
Ngenhlanhla, imodeli entsha, izinqubo ezintsha, nobuchwepheshe obusha - obuqhutshwa yi-AI nedatha enkulu - sekuvelile ukukhombisa indlela engcono eya phambili kuyo yonke inkampani ye-B2B: I-Akhawunti-Based Experience. Nasi umhlahlandlela wakho osemthethweni, ophelele wokusebenzisa i-lens egxile kumakhasimende ne-akhawunti kucebo le-B2B lokuya emakethe. Kufakiwe kumhlahlandlela:
Kungani Okuhlangenwe Nakho Kwe-Akhawunti?
Izinqubo ezi-5 ze-ABX
Yakha isisekelo sedatha ye-akhawunti yakho
Thola ama-akhawunti abalulekile
Bandakanya (Qonda, Yenza kube ngokwakho, Khangisa, Hlanganyela, ne-Orchestrate)
Vala amathuba ngokuqondanisa ukumaketha nokuthengisa
Linganisa inqubekela phambili ye-akhawunti
I-ebook ibuye ifake imininingwane yokwakha ithimba lakho lezinkanyezi ze-ABM, ukuthi unganquma kanjani amabhajethi, futhi lifaka amanye amakhasi okusebenzela ukuze uqalise.
Landa Umhlahlandlela Ocacile Nophelele Wokuhlangenwe nakho Okususelwe ku-Akhawunti (ABX)
Tags: abmabm isikhangisoizabelomali ze-abmabm ebookukuzibandakanya kwe-abmukwenziwa kwe-abmi-abm orchestrationamasu e-abmabxuhambo lwe-akhawuntiulwazi olususelwa ku-akhawuntiukumaketha okusekelwe ku-akhawuntiaiidatha enkului-demandbasethwebulai-ebookukubandakanyekau-downloader mahhala
Iphrinta Yodonga: Isixazululo Esimile Sokuphrinta Sezindonga Zangaphakathi Nangaphandle